Uhlalutyo lweeMathiriyeli zekrwada- iSuzhou Bricmaker yokuZenzekelayo Co., Ltd.
Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni ziya kuba lula impumelelo. Uthuthu lwempukane, umsila, inkunkuma yokwakha, uShale, intlenga yoMlambo, umhlaba weNkunkuma, iLoess, udaka lobomi, iGangue.
Umsebenzi waseprayimari wokuseka isitena esenziwe ngezityalo: Izinto zokwenziwa kweekhemikhali kunye neepropathi zomzimba (kubandakanya ubushushu bokushisa kwangaphakathi, njl. Njl.) Ukuvavanywa, okwangoku kulinganisa ukufuma kwezitena eziluhlaza ezenza & extrusion.
Uhlalutyo lokwenziwa kweekhemikhali luhlala lilinganiswa njengeSiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, magnesium oxide, isalfure gangue, ilahleko kwimoto njl njl.
I-SiO2: Umxholo uphezulu kakhulu, iiplastikhi ezisezantsi, nangona zilungile ukomisa ngokukhawuleza, nangona kunjalo iimveliso ezigqityiweyo zinamandla aphantsi.
Al2O3: Ukuba ingaphantsi kwe-12%, amandla oomatshini eemveliso ancitshisiwe, ukuba ngaphezulu kwe-24%, iqondo lokudubula liyonyuka, lonyusa inani lamalahle.
Fe2O3: Umxholo uphakamileyo kakhulu uya kunciphisa iimveliso ezenziwa ngokhanyiso, okukhokelela kubushushu obuphantsi bokuntywila.
I-CaO: Ukunikezela kwimeko ye-CaCo3 kwimathiriyeli ekrwada, ehlelwe njengezinto ezinobungozi, Ukuba amasuntswana amakhulu kune-2mm, inokubangela isitena okanye ukugqabhuka xa kutsha.
I-MgO: Okuncinci kokungcono, kungenjalo, iimveliso ezikhula ngokulula zivelisa i-magnesium, ebangela ukuba iHarfrost emhlophe.
Isalfure Dagan: Ukuba sulphate kwizinto eziluhlaza, umxholo akufuneki udlule kwi-1%. Xa usitsha, iyakwenza i-SO2 kwaye idle izixhobo zomgangatho wokuvelisa, inobungozi kwimpilo yabasebenzi.
Ukuphulukana nocinezelo: Kubangelwa zizinto eziphilayo. Ukuba ilahleko ephezulu kucinezelo, umngxunya ongaphezulu wemveliso.
Icandelo leKhemikhali SiO2 Ifanelekile 55 ukuya kuma-70
Iyafumaneka 55- 80
Al2O3 Ifanelekile I-15 ukuya kwi-20
Iyafumaneka 10 25
YFOO3 Ifanelekile 4 ～ 10
Iyafumaneka 3 ～ 15
CaO Iyafumaneka 0 ～ 10
MgO Iyafumaneka 0 ～ 3
SO3 Iyafumaneka 0 ～ 1
ilahleko ekubetheni Iyafumaneka 3 ～ 15
Umxholo okhathalayo ＜ 0.5mm Ifanelekile 0 ukuya ku-25
2, 0.5mm Iyafumaneka 0 ～ 2
Uhlalutyo lweNtsebenzo yePhysical: Ngokwesiqhelo kulinganisa amasuntswana abunjiweyo, ubukho beplastikhi, ukuncipha, ukomisa ubuntununtunu kunye nokubanakho kwesinter.
Ubume beplastikhi: Xa isalathiso seplastikhi sikwi-7 ~ 15, eyona ilungele udongwe oluphakathi lweplastiki.
Shrinkage: Linear shrinkage <6%, ukuba iphezulu kakhulu ukuba ungaphula iimveliso, ezichaphazela umgangatho wezitena.
Ukomisa ubuntununtunu: Iplastikhi ephezulu yempahla eluhlaza, intle yamasuntswana, ikwakhona ukuphakama kobuntununtunu bokumisa. Ubume bokuthamba bumisela inkqubo yokomisa inkqubo, into ebangela ukuba izitena eziluhlaza ziqhekeze umphezulu.
Ubudlelwane bokwenza umxholo wokufuma kunye nokoma uvakalelo
Isitena esiluhlaza sokubumba isitena
Amanzi abaluleke kakhulu kwizitena eziluhlaza
Ukomisa ukungalingani kobuntununtunu
Uhlalutyo lwekhemikhali lwezinto ezisetyenziswayo, iipropathi zomzimba kunye novavanyo lokunyibilikisa ukufuma kugqiba ukuba kunokwenzeka kokusebenzisa izinto ezingafunekiyo kwaye zichaphazele inkqubo yoyilo elandelayo, ukhetho lwezixhobo, ubume beziko, umgangatho wemveliso kunye neminye imiba yenkqubo yemveliso.